CD/ DVD Editing (burning )software and Tips - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် » ..:: ကွန်ပျူတာနယ်ပယ် ::.. » Software များဆိုင်ရာ
CD/ DVD Editing (burning )software and Tips
Software များဆိုင်ရာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ထွက်ရှိသောနေသော Software အသစ်များအကြောင်း ၊ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော Software များအကြောင်းနှင့် အသုံးချပုံများအကြောင်းဆွေးနွေးထားသည့်နေရာပါ..
29-03-2011, 10:47 PM
ပို့စ် 479 ခုအတွက် 4,822 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော် ဒီလင့်လေးကိုတွေ့မှာ CD/ DVD Editing (burning ) အတွက် ဆုပီး တင်ထားတာကို သွားသတိရတယ် အရင်ကတည်းက ချပေးဖို့ပါပဲ့။ ကျောင်းက တဖတ် ဖြစ်လာတော့ ကျွန်တော် ဖိုရမ်ကို သိပ်မ၀င်ဖြစ် ဖြစ်လာလို့ပါ ကျောင်းစာတွေက လည်း အရမ်းကို များလာလို့ ပါ ။ အကို အစ်မတို့ နားလည်ပေးမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားတွေ ရှိတယ် အလုပ်လုပ်ရင်း ဖိုရမ်ကို ၀င်နေတဲ့သူတွေ အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ် ကြုံတဲ့သူက မေးခွန်းတွေကို ၀င်ဖြေပေးသွားကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲ့လို ဖြေပေးသွားတဲ့ အကို အစ်မ တို့ အားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တကယ်တန်းပြောရမယ် ဆိုရင် ကျွန်တော် ၄ လပိုင်းမှာ စာတွေ ပိမယ်ဆိုတာကို ကြိုသိပါတယ် အဲ့တာကြောင့် ကျွန်တော် . စာတွေကို ကြိုလုပ်နေရလို့ အရင်လို့ သိပ်မ၀င်ဖြစ်တာပါ။ ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော် အရင်က ရည်ရွယ်ထားတာလေးကို ဆက်ပီးတင်ပေးဖို့ အစတည်မိပါတယ်။ ကျွန်တော် တင်ပေးတာတွေကို ကွန်တော် တခုချင်းဆီတော့ ပြန်ရှင်းပြပေးပါဦးမယ်။ Editing ပိုင်းနဲ့ Burning ပိုင်းတွေ ကို အနည်း အကျဉ်း ရှင်းပြပေးပါမယ် ။ နောက်ပိုစ်တွေမှာ ပါ။ ခုတော့ ကျွန်တော်အသုံးပြုပုံတွေကို မရေးပေးသေးပဲ့ ဆော့ဝဲ့တွေကို အရင်တင်ပေးထားလိုက်ပါတယ်။ အချိန် ရရင် ရသလို့ အဆင်ပြေအောင် အတက်နိင်ဆုံးကြိုးစားရေးပေးပါ့မယ်။ အောက်မှာ6မျိုး တင်ပေးထားပါတယ်။
၁။ ။ Nero_Burning_ROM
၂။ ။ NCH.Express.Burn
၃။ ။ DVD-Cloner_8.00
၄။ ။ CyberLink_Power2Go_7.0.0
၅။ ။ Corel.WinDVD.Pro.2010.v10.0.5.163
၆။ ။ DVDMF.PRO_7.00.398
ကျွန်တော် တပိုင်းခြင်းဆီကို တပိုစ့်ချင်းဆီ ရှင်းပြပေးသွားပါ့မယ်။ အကို အစ်မများ အရင်ဆုံးဒေါင်းထားနိင်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ အဆင်ပြေမယ့်ဆော့ဝဲကို ဒေါင်းထားပါ ။ နောက်ပိုင်းမှာ တူတူလိုက်ပါ လုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ။ အဆင်ပြေအောင်နားလည်လွယ်အောင် အတက်နိင်ဆုံးရေးပေးပါ့မယ်. ။ သဘောတရားတခုကို နားလည်သွားမယ်ဆိုရင် နောက်ထပ် Burning ပဲ့ ဖြစ်ဖြစ် Editing ပိုင်းပဲ့ ဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေလွယ်ကူသွားမှာပါ.။ အကို အစ်မတို့ အရင်ဆုံး စမ်းကြည့် လေ့လာကြည့်ပါ။ ပီးတော့ ဒီနေရာလေးမှာလည်း တစုတစည်းတည်းဖြစ်အောင်လို့ ပါ ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပေးကြဖို့ ဖတ်ခေါ်ပါတယ်။
အကို အစ်မ အားလုံးကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ.
ပရဟိတ စိတ် အပြည့်နဲ့ လူအများ အကူညီလိုအပ်မူတွေကို ကူညီကြပါစို့လား။
စိမ်းလန်းမြေ ပရဟိတ ဖိုရမ်
Thant Zin Htay
Last edited by သန့်ဇင်ဌေး; 16-05-2011 at 05:33 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 36 ဦးတို့မှ သန့်ဇင်ဌေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစံငြိမ်း, ခိုင်မြဲ, ချစ်သမီး, ငါးကြော်, ဆွိ, ထိန်လင်းမောင်, နီထွန်းဦး, ပန်းသီးလေး, လမ်းပြကြယ်, ဟန်နီသူသူ, အိမ့်ဖြူ, ဇေယျာအေး, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, မေဦးမွန်, မောင်ပေါ်ဦး, အောင်မင်းကို, အောင်မိုးထွန်း, arkaraung, aungphyo, bagothar85, blackNwhite, bonge, g00gle, htaynaingwin, htoo war, james249, kyawswarl, KznT, maythumg, mgwinhlaing, phoetharlay, PyaitSone, sugayork, tunnotepad, zo
Find More Posts by သန့်ဇင်ဌေး
30-03-2011, 03:48 PM
ပို့စ် 291 ခုအတွက် 1,204 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - CD/ DVD Editing (burning )software and Tips
မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးပါ ကိုသန့်ဇင်ဌေး ...
ခုလိုမျိုးဘက်စုံ အသုံးပြုလို့ရတဲ့ applications တွေကိုတစ်နေရာတည်းမှာ
ပေါင်းပြီးတင်ပေးတဲ့အတွက် အားလုံးကိုယ်စားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ။
Bonus အနေနဲ့ တစ်ခုချင်းစီ အသုံးဝင်ပုံတွေကိုပါ အချိန်ပေးပြီးရှင်းပြမယ်
လို့ကြော်ငြာထားလို့ အတိုင်းထက်အလွန်စိတ်ဝင်စားမိပါတယ် ။ အကိုပြောသလို
ဆွေးနွေးမှု့တွေအတွက် လိုအပ်မဲ့ Softwares တွေကိုအကုန်နီးပါးဒေါင်းပြီး
ပါပြီ ပြဿနာဖြစ်တာကအောက်ဆုံးက DVDMF.PRO_7.00.398 မှာပါ ။ မနေ့
ကနေဒေါင်းနေတာ အောက်ဆုံးတစ်ခုကျမှအဆင်မပြေဖြစ်နေလို့ ။ ဘယ်လိုဖြစ်
တာလဲဆိုတော့ Error 404 - Page Not Found ဘာညာလာပြောနေလို့ ။ အပေါ်က
ဟာတွေကိုဒေါင်းတုန်းကတော့ ဘာမှမပြောဘူး ။ အဲဒါလေးကျမှ ဖြစ်တာ ။ ကျွန်တော်
ကပဲ မဒေါင်းတတ်တာလားမသိဘူး ။ အချိန်ရရင် ပြန်စစ်ပေးစေချင်ပါတယ် ။
ကိုသန့်ဇင်ဌေး အဆင်ပြေသွားပြီဗျို့ လင့်ခ်တွေပြန်ပြင်ပေးတဲ့အတွက်
Welcome Warmly From Peaceful Crescent Land Of Mine !!!
Last edited by စစ်တွေသားချေ; 31-03-2011 at 02:47 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ စစ်တွေသားချေ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ချစ်သမီး, သန့်ဇင်ဌေး, နေမင်းမောင်, aungphyo, kyawswarl, mgwinhlaing, minthike, sugayork, zo
Find More Posts by စစ်တွေသားချေ
30-03-2011, 03:57 PM
Originally Posted by စစ်တွေသားချေ
့ error 404 - page not found ဘာညာလာပြောနေလို့ ။ အပေါ်က
ပဲမဒေါင်းတတ်တာလားမသိဘူး ။ အချိန်ရရင် ပြန်စစ်ပေးစေချင်ပါတယ် ။
ကျွန်တော် စတင်တုန်းကတော့ လင်လေးတွေကို ပြန်စစ်ပေးပါသေးတယ်။ အဲ့တခုကျမှ ဘယ်လို ဖြစ်သွားလည်း မသိဘူး အကိုရေ.. အခု ညီလေး အဲ့လင့်နေရာမှာပဲ့ လင့်ပြန်ချိန်ပေးထားလိုက်ပါတယ် အကိုရေ..။အကို အစ်မ အားလုံး အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 14 ဦးတို့မှ သန့်ဇင်ဌေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစံငြိမ်း, ချစ်သမီး, စစ်တွေသားချေ, နီထွန်းဦး, နေမင်းမောင်, မေဦးမွန်, bagothar85, g00gle, kyawswarl, mgwinhlaing, minthike, phoetharlay, sugayork, zo
12-05-2011, 02:16 PM
ပို့စ်3ခုအတွက်5ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
CD clone and DVD clone software ကဘယ်လိုသုံး ရတာလဲပြောပြပေးပါ တင်ထားပြီးဘယ်လိုသုံးရမှန်းမသိလို့ပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ boyfriend အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
kyawswarl, mgwinhlaing, zo
Find More Posts by boyfriend
16-05-2011, 05:30 PM
Originally Posted by boyfriend
ကျွန်တော် စာမေးပွဲကြီးဖြေနေရလို့ပါ။ ဒီကြားတည်းမှာ အားလပ်ရက်ကြုံတဲ့ အချိန် ကျွန်တော် ၀င်တင်ပေးသွားပါ့မယ်။
တခါတည်းလည်းပြောပြဖို့ စာကိုရေးထားတာ မရှိတာတကြောင်း စာရေးတဲ့အခါမှာ အကုန်လုံးကို နားလည်အောင်လို့ ရေးပေးချင်မိလို့ ဒီပို့စ်ကို ခဏ စောင့်ပေးပါလို့ပဲ့ တောင်းဆိုပါရစေ။ ကျွန်တော် စာမေးပွဲပီးမှ ကျွန်တော်ရေးဖို့ကျန်နေတဲ့ ပိုစ် ၃ ပိုစ့်ရှိပါတယ်။
Laptop အကြောင်း သိကောင်းစရာ.
ကျွန်တော်နဲ့ Flash ခရီးစဉ် နောက်ဆုံးအပိုင်း
ဖိုတိုရှော့ လေ့လာချင်သူများအတွက် အခြေခံများနှင့် …
အဲ့အပိုင်း ၃ ပိုင်းကို ဆက်ရေးဖို့ ကျွန်တော် အားထည့်ပါ့မယ်။ အဲ့တော့ ကျွန်တော် စာမေးပွဲကာလအတွင်းမှာ မဖြေပေးနိင်တာကို နားလည်ပေးပါခင်ဗျာ သိတဲ့ အကို အစ်မ များရှိရင်လည်းဝင်ဖြေပေးသွားပါလိမ့်မယ်။ ၀င်ဖြေပေးပါလို့လည်း တောင်းဆိုပါတယ်။ အားလုံးပျော်ရွှင် လိုအင်ပြည့်ပါစေဗျာ.။။
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ သန့်ဇင်ဌေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဆွိ, နေမင်းမောင်, bagothar85, g00gle, kyawswarl, KznT, mgwinhlaing, minthike, sugayork, zo
28-05-2011, 09:50 AM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: May 2011
ပို့စ် 26 ခုအတွက် 46 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ရှင်းပြတာကိုစောင့်နေမယ်နော်။ avira antivirusလေး ဖြစ်နိုင်ရင်တင်ပေးပါဗျာ။ ကျနော့ကွန်ပျုတာမှာဘာ ဗိုင်းရပ်ဆော့ဝဲလ်မ မရှိဘူးဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ thawthar အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by thawthar
28-05-2011, 12:28 PM
Originally Posted by thawthar
ရှင်းပြတာကိုစောင့်နေမယ်နော်။ avira antivirusလေး ဖြစ်နိုင်ရင်တင်ပေးပါဗျာ။ ကျနော့ကွန်ပျုတာမှာဘာ ဗိုင်းရပ်ဆော့ဝဲလ်မ မရှိဘူးဗျာ။
ကျွန်တော် ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ် တချက်လောက် သွားကြည့်ပေးပါဦး
ကျွန်တော် ရှင်းပြပေးဖို့ကိုတော့ နောက်အပတ်က စပီး ကျောင်းပိတ်ပီမို့ . ကျွန်တော် ရေးဖို့ ကျန်နေတဲ့ ပိုစ်တွေ
အကုန်လုံးနဲ့ ကျွန်တော် သိတဲ့ အပိုင်းလေးတွေကို ဆက်ပီး မျှဝေပေးသွားပါမယ် ။
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ သန့်ဇင်ဌေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နီထွန်းဦး, နေမင်းမောင်, bagothar85, g00gle, kokomyomin, kyawswarl, KznT, mgwinhlaing, minthike, sugayork, zo
30-05-2011, 06:06 PM
ပို့စ် 175 ခုအတွက် 1,065 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
avira antivirusလေး ဖြစ်နိုင်ရင်တင်ပေးပါဗျာ။ ကျနော့ကွန်ပျုတာမှာဘာ ဗိုင်းရပ်ဆော့ဝဲလ်မ မရှိဘူးဗျာ။
အောက်က လင်.ကလေးမှာ သွားယူလို. ရပါတယ်ဗျာ။အဆင်ပြေပါစေ။
[MARQUEE][CENTER][B][I][COLOR="Blue"]:1: ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သူအတွက် ဖြစ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းတွေ တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတွေ့ မှာသေချာတယ် :1:[/COLOR][/I][/B][/CENTER][/MARQUEE]
[center][COLOR="DarkRed"] GUIDESTAR [/COLOR][/CENTER]
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ လမ်းပြကြယ် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နီထွန်းဦး, သန့်ဇင်ဌေး, နေမင်းမောင်, bonge, g00gle, kyawswarl, KznT, mgwinhlaing, minthike, sugayork, zo
Find More Posts by လမ်းပြကြယ်
08-06-2011, 05:26 AM
ကျွန်တော် အရင်က ဒီပို့စ့်ကို ထပ်ပီး အသက်သွင်းကာကျရင် ဆော့ဝဲ့ကို ပြန်ရမ်းပီး Screen shot တွေနဲ့ ပြမယ်ပေါ့။ အကုန်လုံးလည်း နားလည်နိင်အောင်ဆိုပီး ကျွန်တော် အတွေးတွေနဲ့ တွေးထားတာ။ ခုတော့ စိတ်ကူးပြောင်းသွားပီ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ Screenshot တွေထက်ပိုကောင်းတဲ့ နည်းလမ်းလေးကို သွားတွေ့မိလို့ပါ။ အဲ့တာနဲ့ ကျွန်တော်လည်း သဘောကျတယ်။ Mb လည်းနည်းတယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော် အရမ်းကို ကျေနပ်သွားတယ်။ မိသားစု အားလုံးလည်းကျေနပ်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ကျွန်တော် နည်းနည်းလေး ပြန်ညွှန်းကြည့်မယ်နော်။
ခု ကျွန်တော် တင်ပေးထားတက Nero burning ROM ပါ။ ဒီနေရာမှာ ကိုကျော်ဇင်သန့် တင်ပေးထားတဲ့ Nero Multimedia suite ဆိုတာ ရှိပါသေးတယ်။ အဲ့တွက် နှစ်ခုလုံးတွက် ကျွန်တော် ရှာဖြစ်ဒါအပြင် Nero 8 . Nero9. ကိုပါ ဆက်ရှာဖြစ်သွားတယ်။ ဘာကို သဘောကျသွားတာလည်းဆက်ပြောမယ်နော်။ ကျွန်တော် Nero Burning ROM ကို တင်ပေးထားတာလည်းဖြစ်တဲ့ အပြင် သူ့ကို ဦးစားပေးပြောမှာမို့ Nero Burning ROM တွက် အောက်က ဖိုင်လေးကို Download ချလိုက်ပါ။ ရလာတဲ့ Exe ဖိုင် ၅ ဖိုင် ရပါလိမ့်မယ်။ တဖိုင်ချင်းဆီကို ဖွင့်ပီး Tutorial လုပ်ကြည့်ပါ။ တဖိုင်ချင်းဆီမှာ သူ အဆင့်လိုက်လေး ဘာပီးရင် ဘာလုပ်ရမယ် ။ ဘာလုပ်ချင်ရင် ဘယ် ဖိုင်ကိုရွေးရမယ်ဆိုတာကို သူက (Click Here ) ဆိုပီး ညွှန်းညွှန်းပီးရှေ့ဆက်သွားခိုင်းထားတယ်။ ဆော့ဝဲ ကို ရမ်းပီးခွေထည့်စရာမလိုပဲ့ တိုက်ရိုက် စမ်းသပ်လေ့လာလို့ရတယ်။ အောက်က ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ရင် ပိုနားလည်သွားမယ်ထင်တယ်။
သူနိပ်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာ Click Here ကို နိပ်ပေးလိုက်မှ ဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို သူ ဆက်လုပ်ပြပါတယ်။ ဒီလို ပဲ့ အကုန်လုံး Tutorial တွေ ချည်းပဲ့ လေ့လာပီး စမ်းသပ်နိင်ပါပီ။ ကျွမ်းကျင်ဖို့ ကိုယ်တိုင် ထိတွေ့ပီး လေ့လာလို့ရပါပီ။
အဲ့လိုလေ့လာဖို့တွက် ကျွန်တော် Nero Burning ROM တွက် အောက်ကဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ်ချပီးလေ့လာနိင်သလို နောက်ထပ် Nero 8 ,9, 10 အားလုံး တွက် ဒီလို Tutorial တွေချည်းပဲ့ ရှိတဲ့ လင့်နေရာကိုပဲ့ ပြန်ညွှန်းပေးလိုက်ပါ့မယ်။
ကျွန်တော် ညွှန်းထားတဲ့ စာမျက်နာတွေရောက်ပီဆိုရင် Nero Version လိုက်မှာ လုပ်ဆောင်လို့ရတာလေးတွေကို သူက ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ ခွဲပြထားပါတယ်။မိမိလေ့လာလိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးကို ရွေးပီး ကလစ်တချက်နိပ်ပီး တိုက်ရိုက် အွန်လိုင်းပေါ်မှာတင်ကြည့်လို့ရသလို သိမ်းထားလို့လည်းရပါတယ်။ အပေါ်က ပေးထားသလို Tutorial မျိုးလေးတွေကိုမှ သိမ်းချင်တယ်ဆိုရင့်ကျွန်တော်တို့ PDF ရယ် Exe ရယ် Video exe format ရယ်ဆိုပီး ဒေါင်းခါနီးကျ သုံးမျိုးရွေးရပါလိမ့်မယ်။ အဲ့နေရာမှာ Exe ဆိုတာလေးကိုရွေးပီးဒေါင်းပါ။ အောက်ကပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ရင် နားလည်မှာပါ။
ဒါဆို စာဖတ်စရာမလိုတော့ဘူး။ ကိုယ်တိုင်လုပ်နေသလို ထိုင်ပီးလေ့ကျင့်ခန်းလိုလုပ်နေလို့ရပီ။ ဒီသင်ခန်းစာတွေကိုကောင်းကောင်းလေ့လာပီး လက်တွေ့လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Nero သုံးနည်း အကုန်လုံးနီးပါးကို နားလည်သွားနိင်လောက်ပီလို့ထင်ပါတယ်။
Nero ကိုကောင်းကောင်းနားလည်သွားပီဆိုရင်တော့ NCH.Express.Burn ကတော့ လှည့်တောင်ကြည့်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ ဒါပေ့မယ် သဘောတရားတွေက တူတူဆိုပေ့မယ် Screenshot လေးတွေ တွေ့ရမှ ကျွန်တော်ဆို စာဖတ်ရတာ ပိုအားရှိတာ ။ မိသားစုတွေလည်း အဲ့လို လူတွေများမယ်ထင်တယ်။ အဲ့တာကြောင့် ဒီလင့်မှာ သွားပီး Screenshot တွေကို လေ့လာကြည့်နိင်ပါတယ်။ အားလုံး အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဆက်ပါဦးမယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 19 ဦးတို့မှ သန့်ဇင်ဌေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ချစ်သမီး, နီထွန်းဦး, လမ်းပြကြယ်, ဝင်းကျော်ဦး, အောင်မင်းကို, alicia5556, Annku, arkaraung, bagothar85, bonge, g00gle, htoo war, kyawswarl, KznT, minthike, phyulayswe07, sugayork, zo
17-09-2011, 01:12 PM
ပို့စ် 295 ခုအတွက် 2,489 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Neo ဖြင့် Data DVD Burn ခြင်း
Data တွေ DVD နဲ့ သိမ်းထားချင်လို့ Neo နဲ့ burn ရင်း မသိတဲ့သေးတဲ့ မောင်ညီမလေးများအတွက် ........
ပထမဆုံး Desktop ပေါ်က Neo icon ကို Double Click လုပ်ပီးဖွင့်ပါတယ်
Data တွေပဲကူးမှာမို့ Data ကို ရွေးပါမယ်
ပြီးရင်DVD နဲ့ကူးမှာမို့ Make Data DVD ကိုရွေးမယ်
ကူးမဲ့ Data တွေကို Select လုပ်ပီး Add လုပ်ပါမယ်
နောက် Write Speed နဲ့ Use Multi Recorder (အရင်ရိုက်ထားတာရှိတယ်ဆိုရင်) ကိုရွေးပါမယ်။ ပြီးရင် Burn ကို နှိပ်ပါမယ်။
အောက်ပုံမှာ Writing လုပ်နေတာတွေ့ရမယ်
Complete ဖြစ်သွားရင် Ok ပြောပြီး window ကို ပိတ်ပြီး Data DVD ကူးတာ ရသွားပါပြီ။
Add လုပ်ထားတဲ့ Data တွေသိမ်းထားအုံးမလား ဆို No ပေါ့ မသိမ်းတော့ပါဘူး။
“ဆန္ဒ၀တော ကိံနာမကိစ္စံ န သိဇ္ဈတိ” (ပြင်းထန်သောဆန္ဒရှိသူသည် ဘယ်ကိစ္စမဆို မပြီးသည် မည်သည်မရှိ)
Luck is not born by itself. It is the result of action.
အောက်ပါအသင်းဝင် 16 ဦးတို့မှ ဆွိ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ချစ်သမီး, နီထွန်းဦး, ဖူးလေး, မောင်ပေါ်ဦး, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, အောင်ဗလ, အောင်မင်းကို, aozora, bagothar85, g00gle, minthike, phyomyintthein, phyulayswe07, PyaitSone, tu tu, zo
Find More Posts by ဆွိ
14-01-2012, 11:30 AM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Dec 2011
ပို့စ် 41 ခုအတွက် 61 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အကို ကျနော် စက်မှာ nero 8 software တင်းထား video တွေကို ကူးတယ် အခါ မှာ ကူးလို့ မရလို့ ဖြစ်နေတယ် ကျန်တာ mp3 တွေ ကျ ကူးလို့ ရတယ် အဲဒါ ဘာဖြစ်လို့ လည်း အကို ရှင်းပြါ ပါ နော်
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ မျိုးကြီး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by မျိုးကြီး
14-02-2012, 09:59 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Jan 2012
ပို့စ်5ခုအတွက် 17 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော်စက်မှာ nero7တင်ထားပါတယ်...ဇာတ်ကားခွေကူးရင်.(ဥပမာ-မြန်မာဇာတ်ကား) အသံနဲ့ရုပ်နဲ့တထပ်တည်းမကျဘူး..အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲရှင်းပြပေးဦနော်...ကျေးဇူးတင်းပါတယ်...
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ aungpyaesonetoe အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by aungpyaesonetoe
17-02-2012, 11:21 AM
ဘော်ဒါတို့ ကျနော်ကို cyberlink power director9software လေး အသုံးပြု နည်း လေးကို တစ်ချက် ရှင်းပြပေးပါနော် အသုံးပြုပုံလေး စုံ လင်အောင် ပြောပြ ပေးပါနော် အားကိုပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နော် cyberlink power director9software အသုံးပြုပုံ စာအုပ် လေး ရှိရင် mediafire လေး နဲ့ တင်းပေးပါ နော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
17-02-2012, 12:52 PM
ပို့စ် 1,900 ခုအတွက် 9,442 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အကိုရေ ကျွန်တော်တင်ပေးထားပါတယ် အဆင်ပြေပါစေ လင့်အဆင်မပြေရင်ပြန်ပြောပါနော် ................
Cyberlink power director9Guide Pdf
တွယ်ရာမဲ့သော ကျွန်တော် ဘ၀
ကျွန်တော်တင်ထားသောပုံများ မတွေ့ရပါက ဒီနေရာမှာ အကောင့်ဖောက်ပါ။
ကျွန်တော် facebook မသုံးပါ။ twitter တော့သုံးပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ မောင်ပေါ်ဦး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
alicia5556, minthike, zo
Find More Posts by မောင်ပေါ်ဦး
17-02-2012, 01:10 PM
Originally Posted by aungpyaesonetoe
Nero က Image,Project,Copy ကနေ Copy Disc ကနေ ကူးပါ မူရင်း အခွေရဲ့ အတိုင်းထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကူးပုံကလဲလွယ်ပါတယ် ကူးချင်တဲ့ CD ထည့် ပြီးရင် Copy Disc ကိုနှိပ် ပြီးရင် Copy ကိုနှိပ် သူကူးနေပါလိမ့်မယ် ပြီးရင် တော့ အခွေထွက်လာမယ် ထွက်လားရင် ကိုယ်ကူးမယ့် အလွတ်ကို ထည့်ပြီးတော့ ခွေဗန်းကို ပြန်ပိတ်ပေးလိုက်ပါ သူဖာသာသူကူးနေပါလိမ့်မယ် ပြီးရင်တော့ အခွေထွက်လားပါပြီ..............
minthike, phyulayswe07, zo
17-02-2012, 05:41 PM
ခင်မင်စွာဖြင့် ဘော်ဒါ တို့ ကျနော်ကို cyberlink power directory9software အသုံးပြု ပုံ လေး ကို တစ်ချက်လောက် ရှင်းပြ ပေးပါ နော် cyberlink power directory9software အသုံးပြုပုံ စာအုပ် လေး ရှိရင်လည်း mediafire လေး နဲ့ တင်းပေးပါ နော်
18-02-2012, 09:16 AM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: May 2009
ပို့စ် 556 ခုအတွက် 3,044 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
တစ်ခုခု အကူအညီတောင်းတော့မည်ဆိုလျှင် မေးမြန်းမှု အတတ်ပညာ ကိုဖတ်ပေးကြပါ။
ဒို့ဗမာ ဆိုတဲ့သီချင်းလေးကို အရမ်းကြိုက်နေတယ်----->
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ ငြိမ်းချမ်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်ပေါ်ဦး, minthike, putty, tu tu, zo
Find More Posts by ငြိမ်းချမ်း
20-02-2012, 11:44 AM
ခင်မင်စွာဖြင့် မိသာစု ညီအကို တို့ ကျနော်က်ို ကူညီပါဦးနော် cyberlink power director9software က video တွေ add ပေါင်းထည့်ရင် တစ်ချို့ video တွေ ကျ ရ တယ် တစ်ချို့ ကျလည်း မရဘူးဖြစ်နေတယ် အဲဒီလို ပေါင်းထည့်လိုက်ရင် you must firstactivate this feature before using it. connect to the Internet and then try again. Activation isafree and quickprocess . H- 264 component activation. စာတန်ပေါ်လားတယ် all media ထားတာကို မရ တယ် video ကျ အဲဒီစာ တန်ပေါ်လာတယ် အကို အဲဒါ ဘယ် လုပ် ရင် ရ လည်း ရှင်းပြ ပါ ဦး အကို တို့ တင်ထားတယ် yberlink power director9software စာအုပ် က အင်္ဂလိပ် လို မြန်မာ လို လေး ကျေးဇူးပြုပြီ တင်းပေးပါ နော် အားကို ပါတယ် နော် ကျေးဇူးလည်း အရမ်းတင်ပါတယ် မိသာစု အကို တိုံ့ နော်
27-02-2012, 06:07 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Feb 2012
ပို့စ် 40 ခုအတွက် 71 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
friend တို့ ကျနော်စက်မှာ nero 8 တင်းထားတာ အဲဒါ video တွေ ကူးတယ် အခါ မှာ ကူးလို့ မရလို့ အဆင်မပြေလို့ burnig rom နဲ့ လည်း မရဘူးဖြစ်နေတယ် အဲဒါ ရ အောင် လို့ အဆင်ပြေအောင် လို့ တစ်ချက်လောက် အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးပါ နော် ကျေူးဇူးတင်ပါတယ်နော်
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ယုယအောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ယုယအောင်
18-09-2012, 11:27 AM
ပို့စ် 18 ခုအတွက် 27 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
mediafire link အသစ်လေးပြန်တင်ပေးပါလား။ ဒီလင့်ကမရတော့လို့ပါ။
Find More Posts by alicia5556
အကြိုက်ဆုံး, burning, burning software and tips, nero
DVD Disc-burn လုပ်ရာမှာ ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အမှားတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်အောင် ပြုလုပ်နည်း (DVD Burning Tips) poekaunglay87 အထွေထွေဗဟုသုတ506-01-2011 02:12 PM
3 New Buzz tips KznT အထွေထွေဗဟုသုတ 1 27-05-2010 02:38 PM
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 05:52 PM